Kedu ihe bụ USSD? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na U	» USSD
USSD bụ acronym maka Data ọrụ mgbakwunye na -enweghị nhazi.
Usoro nzikọrịta ozi nke ekwentị mkpanaaka na-eji na-ekwurịta okwu na kọmpụta onye ọrụ netwọk mkpanaka. Site na USSD, ndị ọrụ mkpanaka na-emekọrịta ihe ozugbo site na ịme nhọrọ site na menu. N'adịghị ka ozi SMS, ozi USSD na-emepụta njikọ oge na oge ọ bụla, na-eme ka nzikọrịta ozi ụzọ abụọ.